XOG CUSUB: Maxaa keenay Dibu dhaca maanta ee Madaxweynaha Puntland uga baaqsaday Kismaayo?
GAROOWE(P-TIMES) – Warsidaha PuntlandTimes.com ayaa dabagal ku sameeyey wararka keenay dibu dhaca wafdigii uu hogaaminayay Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ee barqanimadii kasoo duulay magaalada Boosaaso, duhurnimadiina soo gaaray magaalada Garoowe oo ay ahayd in ay ku hakadaan, kana soo gudbaan.
Warsidaha wuxuu ogaaday in jadwalka Madaxweynaha Puntland uu ahaa in uu kasoo duulo Boosaaso abaare 10-ka barqanimo soo gaaro Garoowe, ku sugnaado saacad, uuna Garoonka diyaaradaha kula kulmo wafdi kusugayey Garoowe, ka dibna diyaaradiisa oo ay wehliyaan xubno uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Faroole ay u socdaalan magaalada Kismaayo.
Jadwalkaas waxyaabaha bedelay waxaa lagu sheegay in ay ka mid yihiin sadex arrimood oo is biirsaday, diyaaradda oo sheegtay in haddii la duulayo galabnimada 3da galabnimo ay ku adag tahay in ay 5ta ama 11ka galabnimo ka dagto madaarka magaalada Kismaayo.
Puntland oo sheegay in uusan ka hormarin karin 3da galabnimo in ay safarkiisa sii wato iyo waliba wafdiga raaci lahaa oo number ahaan ka batay 50 qof, taasna ay keentay in ay diyaaraddu sheegaan in aysan boosas uhaynin oo diyaaradda oo dhan ay tahay mid qaada 50 rakaab ah oo kaliya.
Sadexdan arrimood oo is biirsaday ayaa sababtay in la baajiyo safarka maanta, sidda aan kasoo xiganay dad ka madax banaan Madaxtooyada Puntland, waxaana Warsiduhu ogaaday in aysan waxba ka jirin wararka sheegaya in diyaaradda la xanibay.
Diyaaraddan ayaa maanta kasoo duushay Nairobi, waxayna intaas soo martay hawada Soomaaliya ilaa ay tagtay Boosaaso oo ay ka dagtay, waxyaabaha xanibi waayay ee hadda xanibayna ay tahay war been abuur ah oo aysan waxba ka jirin.
Diyaaradda ayaa hadda fadhida garoonka Garoowe, waxayna aroornimada 9ka barqanimo qaadi doonta wafdi ka kooban Puntland, Federaalka iyo Marti kale oo Kismaayo laga casumay, sidda ay wararku sheegayaan.